Anshaxayaga - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
At OMI, waxaa naga go'an inaan ku dhaqano habdhaqan ganacsi anshax suuban si looga hortago dhiig-miirashada shaqaalaha ama kheyraadka dabiiciga ah soosaarka dharka.
Waxaan shaqsi ahaan aaminsanahay in shaqaalaha faraxsan ay u dhigmaan dharka sida wanaagsan loo sameeyay maadaama shaqaaluhu ay aad ugu dhiiran yihiin inay qabtaan shaqo wanaagsan haddii ay la shaqeeyaan habab shaqo oo wanaagsan iyo jawi shaqo oo nabadgelyo leh.
Warshadaha & Xaaladaha Shaqada
Warshadeenu ma shaqaaleeyaan shaqaale kayar 16 sano waxayna bixiyaan ugu yaraan mushahar nololeed oo ah ugu yaraan mushahar aasaasi ah oo waqtigiisa ku saleysan.
Warshadeenu ma laha dhaqamo khasab ah, taas oo macnaheedu yahay in aan qofna lagu qasbi karin inuu shaqeeyo waqti dheeri ah oo ka duwan wixii ay iyagu rabeen haddii ay shaqeeyaan saacado dheeraad ah, waxaa jira gunno mushahar dheeraad ah oo dheeraad ah.
Xarumaha wax soosaarka waxaa lagu qalabeeyay tas-hiilaadka nalalka & fayadhawrka iyo xaaladaha shaqada iyo qalabka waa amaan sida ugu macquulsan si looga hortago dhaawacyada shaqada la xiriira. Tusaalooyinka qaarkood waa in aysan jirin fiilooyin koronto / koronto oo furan, waxaa jira meel ku filan oo u dhexeeya xarumaha shaqada, qalabka badbaadada sida birta-mesh iyo galoofyada iyo wajiga ayaa la isticmaali karaa.
Waxaan sidoo kale la shaqeynaa makiinado dhar ah oo ah GOTS la xaqiijiyay & OEKO-TEX 100 la xaqiijiyay Kuwaas oo la tijaabiyey inay badbaado u yihiin isticmaalka aadanaha iyo isticmaalka farsamooyinka wax soo saarka dabiiciga ah.
Warshaddeenu sidoo kale way dhaaftay BSCI shahaado siinta, Macaamiisha sii alaabooyin la isku halleyn karo.